Iyo Apple Watch inogona kunge iine skrini inogara ichishanda zvinoenderana ne patent | Ndinobva mac
Zviri pachena kuti iyo Apple Tarisa kubheja kweramangwana neApple. Zvichida, chichava chimwe chezvigadzirwa zvine fungidziro yakawanda mumhamba yekambani uye saka Apple inoda chigadzirwa chiri nyore uye chinokwezva kune vese vashandisi vayo.
Imwe yezvinhu zvitsva izvo zvatinoona mune anotevera edhisheni yeOSOS inogona kunge iri yekugara ichishanda skrini. Asi mune yakaoma nyika yezvinhu zvitsva, pamwe basa iri rinofanirwa kunyoreswa sepatent, kupa iri basa kune Apple wachi. Ino inguva yekuita basa iri nebhateri rakadzikiswa reApple Watch.
Iko kusahadzika kwekusingaperi pamusoro penguva yenguva yemabhatiri kana mashandiro, ndizvo zviri patafura pari zvino. Mimwe mhinduro yakapihwa nevamwe vagadziri yanga iri yekubva panzvimbo huru semufananidzo usingadzimike unoshandisa zviwanikwa zvishoma. Asi kune rimwe divi, isu tinowana chipingamupinyi neOLED skrini, nekuti ivo vanowanzo kupisa neiyo static skrini. Apple yaizogadzirisa iri dambudziko nekugadziriswa kwekujeka kwekujeka uye dzimwe nzvimbo dzemavara pachiratidziri. Chekupedzisira, zvinodikanwa kuti uwane nzira inoshanda yekushandisa mabhatiri.
Organic mwenje-inoburitsa diode (OLED) ekuratidzira, ayo ari kuve sarudzo inozivikanwa yemakomputa ekuratidzira, anogona kudzikisira zvisina kufanana muhupenyu hwavo hwese, zvichitungamira kune risingadiwe ruvara uye gloss mamaki.
Iye zvino gakava rinomuka maererano nekureruka kwechinhu ichi uye nekushomeka kwesimba padivi raApple. Vamwe vashandisi vanoratidza kuti zvinokwana kuti wachi iite nekukurumidza panongovhurwa ruokoUyezve, zvinoenderana nekamuri iko iko wachi, iko kupenya kwewachi kunogona kukanganisa pane kubatsira. Zvingave zvakanaka kushandisa basa iri zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Semuenzaniso, kuti inoitwa chete panguva yemasikati maawa.
Chero zvazvingaitika, chero nhau nezvazvo, isu tichafara kutaurira vaverengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inogona kuve nechiratidziri chinogara chichiita zvinoenderana patent
7 Bhiriyoni Vanhu, mutambo mutsva wepuzzle yeMac